> Resource > Video > Sida loo Beddelaan M4V in MP3
Maalmahan, dad badan waxay jecel yihiin in music video files ka, gaar ahaan videos music hesho. Sida dadka intooda badan, waxaad u badan tahay badan M4V videos, sida videos music M4V gatay dukaanka Lugood, iyo haysid fikrad weyn oo in MP3 music ka M4V videos hesho. Sababaha tani waxay noqon kartaa madadaalo shakhsi aad ciyaaryahan MP3 music la qaadi karo sida iPod shaandheeyn, nano iPod, classic iPod iyo iPod taabashada iwm
Si aad u soo saaro MP3 ka M4V, M4V xirfadle in MP3 Converter caawin kara. Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) wuxuu noqon karaa doorashada ugu fiican si loogu badalo Lugood iibsaday M4V videos ama faylasha caadi M4V. Iyaga loogu badalo in ay qaab MP3 oo aan wax khasaare ah oo tayo leh maqal ah.
Tutorial Tani waxaa inta badan loola jeedo in lagu isticmaala Windows. Hadda, kaliya bartaan sida loo badalo M4V in MP3 talaabo talaabo ah. Dadka isticmaala Mac, fadlan tixraac hage dadka isticmaala Mac " halkan.
1 dar files M4V in M4V in ay MP3 Converter
Si aad u soo saaro MP3 music ka M4V, marka hore, waxaad u baahan tahay in ay soo dhoofsadaan faylasha M4V aad rabto in aad app this. Kaliya dooro mid ka mid ah saddex hab oo loo sameyn shaqadan.
In menu ugu weyn, waxaa jira a "loogu badalo" tab. Just tago in ay ka dibna dooro "Add Files" doorasho si ay u doortaan M4V faylasha aad rabto in aad soo dhoofsadaan, ka dibna iyaga ku shuban.
Si browser iyo dooran doonayay files M4V aad, waxa kale oo aad ku dhacay karaa "Add Files" ikhtiyaarka in this app ee Murayaad bidix loo sameeyo.
Habka saddexaad optional waa in si toos ah jiidi oo hoos u files M4V barnaamijka.
In tallaabadaas, waxaad u baahan tahay in ay doortaan MP3 sameeyaan suuqa kala qaab wax soo saarka. Si loo furfuro, waxaad leedahay laba siyaabood oo kala duwan. Mid ka mid ah waa in guji image qaab dhinaca midig si uu u furo liiska qaabka; kale waa in la furo liiska qaab hoos-hoos. Marka aad u samayn, kaliya dooro "MP3" in "Qaabka" ayuu> "Audio" category.
Fiiro gaar ah: feature-hodan M4V Tani si MP3 Converter sidoo kale ku siinayaa qaar ka mid ah hawlaha video tafatirka qabow sida jarida, qaybsama, biirtay iyo wixii la mid ah.
3 bilow diinta M4V in MP3
Dhinaca geeska hoose ee midig of this Video Converter 's interface ugu weyn, kaliya ku dhufatey "Beddelaan" button waxaa. App Tani samayn doonaa wax ka nasasho kuu. Markii diinta la sameeyo, waxaad ka heli kartaa wax soo saarka MP3 faylasha adigoo riixaya "Folder Open" button. Waa intaas.
Sidaa daraadeed, aad awoodo inaad ku raaxaysatid M4V music on MP3 ciyaaryahan xor ah. Just hadda badankood ka mid ah aad soo iibsatay music M4V.